Yangon Daily Fuel Rate
Rates shown are indicative only and Subject to Change without Notice.
See all Fuel Price
Earn Miles With Smile
All Your Essential at one Place
DENKO ဆီဆိုင်တိုင်းတွင် Smile Card ကို အခမဲ့ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Get your Point with Smile Card at Denko
Smile Card နဲ့ ဆီအမြဲတမ်းဖြည့်တိုင်း ပွိုင့်တွေရနေမှာပါ။ ဆီဆိုင်ဆိုDENKO.
Denko Jerry Can
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူအဆင်ပြေစေတဲ့ စက်သုံးဆီ ထည့်ရန်ပုံး Jerry Can များကို DENKO ဆီဆိုင်တိုင်းမှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ…….
DENKO ဆီဆိုင်များမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်း ဆရာတော်ကြီးများ၏ မော်တော်ယာဉ်များအား စက်သုံးဆီလှူဒါန်းခဲ့ရာ စုစုပေါင်း တန်ဖိုးငွေကျပ် ၉၃ သိန်းကျော် ( 9,320,532 Ks) တန်ဖိုးရှိစက်သုံးဆီများကို လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
DENKO ဆီဆိုင်များမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ အတွင်း ဆရာတော်ကြီးများ၏ မော်တော်ယာဉ်များအား စက်သုံးဆီလှူဒါန်းခဲ့ရာ စုစုပေါင်း တန်ဖိုးငွေကျပ် ၅၉ သိန်းကျော် ( 5,901,374 Ks) တန်ဖိုးရှိစက်သုံးဆီများကို လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
DENKO ဆီဆိုင်များမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း ဆရာတော်ကြီးများ၏ မော်တော်ယာဉ်များအား စက်သုံးဆီလှူဒါန်းခဲ့ရာ စုစုပေါင်း တန်ဖိုးငွေကျပ် ၅၅ သိန်းကျော် ( 5,569,665 Ks) တန်ဖိုးရှိစက်သုံးဆီများကို လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
View all DENKO Stations
Denko Trading Co.,Ltd Head Office
No(1), Kanaung Minthargyi Road, Shwe Linn Ban Industrial Zone Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar.
(+95) 361 7221, 361 7220, 361 7227, 361 7217, 361 7234, 361 7231, 361 7226, 361 7224, 361 7232, 361 7235
(+95 1)617 237
Call Center +95 1 8610612